Izwi rinonyanya kushandiswa kutsanangura zvigadzirwa zveXiaomi "zvinodhura." Muchikamu chega chega, zvigadzirwa zveXiaomi zvinowanzo kuwanikwa nemutengo wakaderera pane vakwikwidzi. Nekudaro, yekutanga Xiaomi smartphone iyo inotsvaga kukwikwidza nemireza kubva kuSamsung, Huawei, kana Apple inoita kunge isinganzwisisike kune vashandisi vanoona Xiaomi seyekupedzisira isingadhuri "mutengo" mhando. Xiaomi akaedza kupidigura tarisiro iyi nekutanga mafoni emhando yepamusoro senge Mi MIX akateedzana kana iyo Mi-yakashambadzirwa mapaki mumisika senge Europe, uye ivo vakawana kumwe kutsauka mukuchinja mafungiro. Mumisika ine mutengo wakanyanya seIndia, zvakadaro, Xiaomi yakachinja zvishoma nezvishoma zano rayo mushure mekuedza kwekutanga kwekutanga kwemahara kwakundikana. Yayo yekupedzisira yechokwadi mureza kuvhurwa muIndia yaive iyo Mi MIX 2, iyo yakavambwa muna2017, uye mutsivi wayo, iyo M MIX 3, haina kana kuburitswa mudunhu nekuda kwekuzivikanwa kwaXiaomi se "inodhura smartphone brand." Panzvimbo iyoyo, Xiaomi akatarisa pachikamu che-sub-premium smartphones senge DUKU F1 uye mutsivi wayo wemweya, iyo Redmi K20 Pro. Asi pamberi peXiaomi inoisa zvese zvinonetsa kushandura mufananidzo wayo kubva kune bhajeti brand kuenda kune yekutanga uye mukana wekupinda chidimbu uko kudzoka kwekudyara kwakanyanya. Ndipo panopinda mureza weXiaomi, iyo Xiaomi Mi 10, inopinda Mi 10 uye Mi 10 Pro ndiwo anokosha eXiaomi maMi nazvino, uye neiyi kuvhurwa, Xiaomi iri kutsika padyo nechikamu cheiyo chaiyo premium smartphones.
Xiaomi Mi 10 Foramu ||| Xiaomi Mi 10 Pro Foramu
Iyo Xiaomi Mi 10 ine yakajeka uye inotaridzika-dhizaini dhizaini iyo inokwevera maziso ako kwairi. Iyo yemukati Hardware inosanganisira yazvino uye yakasimba kwazvo yeQualcomm's mobile mapuratifomu, iyo Snapdragon 865. Iyo Snapdragon X55 modem inogonesawo rutsigiro rwe5G paMi ​​10, asi izvozvo hazviite mutsauko muIndia nekuda kwekushomeka kwekubatana kwe5G. Iyo Mi 10 yakateedzana zvakare ine 30W inokurumidza isina waya kuchaja uye 108MP kamera.
Kuburitswa kwekare kwaXiaomi kwakaratidza izvozvo vanogona kukunda pakugadzira premium mafoni, saka chii chinoita kuti Mi 10 isiyane? Xiaomi ari kutarisira kuti Mi 10 ichaverengerwa pakati pezvinodiwa zveiyo Samsung Galaxy S20, Apple iPhone 11, kana OnePlus 8. Asi kunyangwe zvese izvo izvo Mi 10 inofanirwa kupa, iyo pfungwa yakashata yeMi brand yagadzira iyo Mi 10 "Inzwa" yakadhurirwa pakati pevateveri veXiaomi. Ko iyo Mi 10's 108MP kamera, yakakomberedzwa Super AMOLED kuratidza, uye Snapdragon 865 inoruramisa sarudzo yaXiaomi kuvhura mureza nemutengo wakakwira kwazvo kupfuura wegore rapfuura Mi 9?
Xiaomi akatikweretesa chinzvimbo cheIndia cheiyo Xiaomi Mi 10 ine 8GB ye RAM uye 128GB yemukati yekuchengetedza yekumisikidza kuti itariswe. Ndanga ndichishandisa chishandiso kubva Chivabvu 19th. Tisati tatanga, heino rundown yezvakataurwa zveXiaomi Mi 10:
Xiaomi Mi 10 5G Rondedzero
Dhivha & Kurema
X X 162.6 74.8 9 mamirimita
180Hz mhinduro yekubata
Peak kokubwinya: 1120 nits
Hole-punchi kuti kamera
Software-based kumeso kucherechedzwa
Sisitimu-pa-Chip Qualcomm Snapdragon 865:
1x Kryo 585 (ARM Cortex-A77-based) Prime pakati @ 2.84GHz
3x Kryo 585 (ARM Cortex-A77-based) Performance yakakosha @ 2.4GHz
4x Kryo 385 (ARM Cortex A55-based) Kushanda kwemhando @ 1.8GHz
30W Fast Wired Kuchaja
30W Kukurumidza Wireless Wachaja
10W Reverse Wireless Chaja
108MP Wide 1 / 1.33 ″, 7P lens, OIS
13MP Ultra-Wide, 123 °, f / 2.4
2MP f / 2.4 Macro Kamera
2MP f / 2.4 Kudzika kweSensor
Software Shanduro MIUI 11 yakavakirwa paApple 10
Sub-6GHz 5G: SA / NSA
Audio Vatauri veStereo, Hi-Res Audio yakasimbiswa
mavara Coral Green, Twilight Gray
Iyo Xiaomi Mi 10 inokodzera mukurumbira wechitarisiko chayo svelte. Foni inoshandisa girazi sangweji dhizaini ine girazi rakakombama kumberi nekumashure izvo zvinoita kuti iratidzike senge yakatetepa kumberi. Magirazi egirazi kumberi nekumashure anodzivirirwa pasi pezvikamu zveGorilla Girazi 5, uye nepo izvo zvichisimbisa chibvumirano chakanaka kubva mukukwaya, uchafanirwa kuvimba nenyaya yekudzivirira chero kukwikwidza kana kukuvara nekuda kwemadonhwe.
Kuvhara magirazi maviri egirazi isimbi yesimbi iyo inokanda pamakona efoni seyetone seam inomhanya pakati pemakona akapoteredzwa epamberi uye kumashure magirazi zvikamu. Iyo furemu ine girazi kupedzisa nemativi akakomberedza anoenderana nekwakakombama dhizaini yefoni. Iko kune ese manomwe manetwork mabhendi padivi pese pese peiyo furemu, uye kunze kweizvi, zvinhu zvinokanganisa kuenderera kwekutsetseka kupedzisa zvinosanganisira mbiri SIM SIM tireyi, yekutanga maikorofoni, USB Type-C chiteshi, uye imwe ye masipika maviri e stereo pazasi pefoni. Iyo rocker vhoriyamu uye bhatani remagetsi riri kurudyi nepo maikorofoni yechipiri, yechipiri yea stereo speaker, uye IR blaster iri pamusoro peiyo Xiaomi Mi 7.
Iyo yekumashure pani yeiyo Xiaomi Mi 10 ingangoita sekuratidzira segirazi. Pane maviri mavara emhando yepaneru yekumashure pane Xiaomi Mi 10 - "Coral Green" kana "Twilight Grey" - uye ini ndiri kuongorora iyo yekupedzisira sarudzo. Iyo yekumashure mapaneru inoumbwa nematanho mazhinji ane akasiyana kusiyanisa ayo pamwe chete anogadzira kunyepedzera kwekudzika. Pamusoro peizvozvo, mwenje unobva kune chero tambo sosi inokombama pamicheto yakakombama yevhavha uye inopararira muVIBGYOR, iyo inogona kana isingaratidzike zvichienderana nekaravara tembiricha yechiedza chechiedza. Izvi zvidiki zvinowedzerwa zvinowedzera hunhu kune yatove yakanatsiridzwa dhizaini yeXiaomi Mi 10. Xiaomi yaita basa rakakura rekuita kuti iyi foni iratidzike seinoyevedza uye yepamuviri sezvinobvira. Kunyangwe iyo sarudzo yegirazi yechando yakadzokera shure ingadai yakave yakanaka, isu hatigone kukanganwa iyo flamboyancy mukugadzirwa.
Dhizaini yeMi 10 inoita kuti iite seinokwezva sezvo chero foni inogona!
Kunyangwe ndaizoyera iyo Xiaomi Mi 10 iyo 10/10 yeayo aesthetics, izvi zvinhu zvinoderedza kushandiswa kwayo. Ipo kukombama padivi pemakona marefu eXiaomi Mi 10 ichiita kuti foni iite kunge yakatetepa, inoonekwa kunge gobvu pakati nepakati uye inoyera nezve 9mm kusanganisa iyo gobvu kamera bump. Kutarisa padivi, iyo kamera bump haigone kufuratirwa nekuti iyo kamera asymmetrical kuisirwa inokonzeresa foni kutenderera painenge ichishandiswa ichizorora pane yakati sandara pamusoro petafura. Chivharo chekudzivirira kumashure kana kesi yakaita seiya yakaiswa mukati mebhokisi (iyo isiri iyo TPU zvinhu asi ipurasitiki inoshanduka) inogona kugadzirisa kutenderera kune imwe nhanho - asi izvo zvinoenderana neukobvu hwechinhu uye kesi.
Iyo dhizaini haina kutevedzera kune Xiaomi yazvino dhizaini dhizaini ye "Aura Balance Dhizaini" iyo yatakaona pane iyo Redmi Cherechedzo 9 Pro / 9S. Iyi uzivi inoratidza kuti dhizaini yacho inowirirana pamutsetse wekufungidzira wakamira nepakati penzvimbo yefoni kuti ugone kutaridzika pakati-kuremerwa.
Redmi Cherechedzo 9 Pro ine yepakati-inorema dhizaini
Nechimiro, hapana musiyano mukuru pakati peXiaomi Mi 10 neMi 10 Pro kunze kweiyo yekuwedzera laser autofocus module pane kamera kamera yePro. Kunyangwe Xiaomi akavhura mafoni eMi 10 mumavara akasiyana uye achipedzisa kuita kuti kusiyanisa kuve nyore, ruzhinji rwevashandisi havazonetsekwe nekucherechedza izvi nuances.
Nezvose zvakapfuma girazi-rakagadzirwa dhizaini kunze uye yepamusoro-magumo specs uye bhatiri hombe mukati maro, iyo Xiaomi Mi 10 inosungirwa kuve inorema - uye ichokwadi iri! Foni inorema zvinopfuura mazana magiramu (200g kuti ive chaiyo). Kuibata inogona kunge iri basa rakaoma, kunyanya kana iwe uchifunga kuita mutambo pane mafoni. Izvi, pamwe nehukama hwepaneru rekuseri kwekutevera zvigunwe uye smudges, ndicho chete chikamu chinondishungurudza nezve dhizaini.
Iyo yekuratidzira, kune rumwe rutivi, inondiunzira iwo mufaro mumwechete sevamwe vakasara dhizaini. Kufambisa iyo Mi 10 pamusoro kumberi, iwe unogamuchirwa nehukuru AMOLED kuratidza ine yakakomberedzwa yekumucheto micheto uye diki gomba-punch cutout. Xiaomi ine zvirevo zvakakwirira zvehunhu hwekuratidzira uye isu tichaenda pamusoro peaya ruzivo muchikamu chinotevera. Xiaomi haasati avhura foni ine girazi dhizaini dhizaini ane ese maviri kumeso akakombama kubvira iyo My Note 2, saka nesarudzo iyi yekugadzira, chishuwo chekambani chekuchinjira kuchikamu cheprimiyamu chinova pachena. Chiratidziro chakakombama, zvakadaro, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kushandisa bhamba kana kesi kana kugara uchitamba nenjodzi yekutyora sikirini kuitira kana foni ikangodonha pane yakaoma nzvimbo.
Iyo 6.67-inch AMOLED inoratidzira inopa pamberi peiyo Xiaomi Mi 10 smartphone. Iyo yekuratidzira inosimbiswa yeHDR 10+ zvemukati uye ine musiyano muyero we5,000,000: 1. Uyezve, Xiaomi anoti chiratidziro chinofukidza 100% yeiyo sRGB, NTSC, uye DCI-P3 color gamuts, zvichiratidza kukwirira kwemavara uye padyo nezvinoonekwa nemeso emunhu. Kunyange Xiaomi isingatauri mugadziri wechiratidziro ichi, pane zvakasiyana zvirevo nezve kupenya kwepaneru. Iko kune musiyano maererano nehupamhi hwekupenya hunotaurwa nemawebhusaiti eXiaomi kumatunhu akasiyana nemitengo iri pakati pe800 nits kusvika 1200 nits. Maitiro akataurwa naXiaomi pakuvhurwa kweChinese, zvisinei, aive 1120 nits dzeMi 10 uye 1200 nits dzeMi 10 Pro. Musiyano uyu ungangotsanangurwa nekubatanidzwa kwemhando yepamusoro yekupenya kusimudzira kupenya kwechiratidziro pasi pezuva.
Mukushandisa chaiko, iyo Xiaomi Mi 10's AMOLED inoratidzira inopenya seSamsung's Super AMOLED mapaneru pane mafoni kusanganisira iyo OnePlus 7T uye Samsung Galaxy S10 Lite. Iyo inoratidzira yakajeka zvakakwana kuti iverengeke kunyangwe pasi pechiedza chakasimba kana chezuva. Kupfuurirazve, iyo yepamusoro kupenya maitiro muXiaomi's MIUI inosimudzira musiyano uye inovhenekera iyo yakasviba mamiriro ekuvandudza kuverenga kuverenga panze pasi pechiedza chakasimba. Iyo yekuratidzira iri kuratidza chaiko asi izvo hazviwanzo kutadzisa kugona kwayo.
Iyi izere HD + inoratidzira ine yepamusoro-notch mhando maererano nemavara uye kupinza.
Kune akawanda ekushandisa kwangu, kutaura chokwadi, ini ndakawana iyo yekuzadza kwemavara iri nani pane zvandaitarisira. MIUI zvakare inopa akawanda sarudzo yekugadzirisa iyo color profil kune yako yaunoda nekumisikidza iyo tembiricha tembiricha. Iwe zvakare unowana iyo Yekutanga menyu yekuchinja parameter senge yekuratidzira kusiyanisa uye gamma kukosha kana fiddle ine hue uye saturation marongero.
Iko kubereka kwemavara, kupenya, uye musiyano wekuratidzira ndedzimwe dzakanakisa mune iri mutengo renji. Paunenge usiri kutarisa musoro-ku, pane diki vara inochinja kana uchitarisa divi. Iko kushanduka kwemavara, zvisinei, kuri mukati memiganhu inogamuchirwa uye hakutadzise ruzivo rwangu.
Kunze kwekuchinja kwemavara pamakona ekuona zvakanyanya, pane musiyano unooneka maererano nekupenya uye kuzadza kwemavara pazvikamu zvakakombama zvekuratidzira. Iwe unongogona kunge uchinetswa nekusiyana uku uchitarisa padivi rekuratidzira inova iyo iyo kupenya uye kupenya misiyano inova pachena - kunyanya kana iwe ukatarisa kumberi pamusoro pemupendero wakakombama wekuratidzira. Kunyangwe kushandisa kuratidzwa kwakakombama pachinzvimbo cheyakagadzika kunowedzera mukana wekuti itsemuke kubva pane zvazvinoita, inowedzera ruzivo rwekushandisa zvimiro zvekufambisa, kunyanya chiratidzo chekutsvagira cheRushure.
Musiyano wekupenya padivi pechikamu chakakombama chinonyanya kuoneka mune yakaderera mwenje
Chimwe chinhu chakakosha chekuratidzira ndeye yayo 90Hz yekuvandudza mwero, ichibvumira kune inotsvedza yekutsvaira ruzivo kana ichienzaniswa ne60Hz kuratidza. Izvi zvinongoreva kuti chiratidziro chinozorodza ka90 sekondi yega yega (kana kamwe chete pa11ms) inova 1.5 nekukurumidza nekukurumidza kupfuura chiratidzo che60Hz. Kunyangwe izvi zvakare zvichireva mutoro wakawanda paCPU neGPU kurodha zvirimo pachiratidziro nekukurumidza, izvi hazvifanirwe kunge zviri dambudziko kune Hardware pane Xiaomi Mi 10. Isu takaona akawanda mafoni emafoni anotsigira mwero wekuvandudza we90Hz, 120Hz, uye kunyange 144Hz, uye maitiro ari pano kuti agare. Iyo Mi 10 uye iyo Mi 10 Pro ndiyo yekutanga mafoni eXiaomi ane 90Hz AMOLED kuratidza, kunyange iyo kambani yakambotanga kuburitsa Redmi K30 nhepfenyuro ine anotsvedzerera 120Hz maLCD.
Iyo 90Hz yekuvandudza mwero inovandudzawo ruzivo mune mimwe mitambo sekufamba kunonzwa kuchinyoroveswa uye kuyerera. Mimwe yemitambo yandakaedza paXiaomi Mi 10 inosanganisira Lara Croft GO, Alto's Odyssey, Mutambo Werunyararo (iyo Chinese vhezheni ye PUBG Mobile), Uye Vainglory, uye mudziyo wacho waive usina kana dambudziko rekumhanya iyi mitambo nguva dzese pamazinga epamusoro furemu. Uye zvakare, iyo 180Hz yekubata yekupindura chiyero cheiyo inoratidzira pani inoreva yakakwira-kusimba vanopfura vanonzwa vanoteerera zvakanyanya kutamba.
Zvimwe kunze kwemitambo, iyo yakakwira zororo mwero inobvumira kutsetseka kupuruzira pamapeji ewebhu kana mune eruzhinji midhiya maapplication senge Snapchat kana Instagram. Cherekedza kuti kutsetseka hakuenzane nekukasira kupururudza sezvo yekupedzisira zvakare kunoenderana neapp zvakanyanya sezvainoita pane Hardware.
Chekupedzisira, chiratidziro zvakare chine dzimba dzepasi-pekuratidzira chigunwe chekutora icho chakanyatsoita uye chinoteerera. Chete caatat ndeyekuti foni inogona kusatombovhura kusvika iyo yekuvhurika mifananidzo iri kushanda, saka kuraira kwangu kungave kusarudza iyo animation iyo inotora ipfupi. Hazvina basa kuti utaure kuti foni inouya nemhando dzakasiyana dzeNguva dzese-dzeKuratidzira sarudzo asi kuzvishandisa kungawedzera kukweva kwebhatiri. Foni inotsigirawo ekumusoro ekuvhenekera sarudzo kuti dzigadzirire kusavapo kweyekuzivisa LED.
Pakazara, kunyangwe paine zvirevo zvakasiyana nezve kupenya kwayo, iyo Xiaomi Mi 10 inoratidzira inogutsa zvinoshamisa kuona zvirimo. Chikamu chakakombama chechiratidziro chinobatana nyore nyore pasina kunamatira kunze kunge chigunwe chinorwadza uye hachipe kuramba kwekushandisa kana kutaipa, kunyanya pamipendero. Iyo Yakazara HD + resolution ingori inokwana kwete kwete kungoita mabasa chete asiwo neyekushandisa midhiya uchifunga rutsigiro rweiyo HDR10 + standard.
Sarudzo yeakanakisa yemukati Hardware ndeye isina-brainer pamutengo uyu, uye saka Xiaomi akaenda nesarudzo iri pachena yeQualcomm Snapdragon 865 chikuva chemafoni kunopa simba Mi 10 neMi 10 Pro. Iyo Snapdragon 865 nharembozha inogadzirwa paTSMC's 7nm N7P hwaro hwekuita, iyo inowedzera kuvandudza pamusoro peiyo yapfuura 7nm DUV maitiro ayo anoshandiswa kugadzira iyo Snapdragon 855 uye 855+ mapuratifomu enhare. Aya optimizations anokonzeresa 7% kukwidziridzwa mukuita zvisinei nekushandisa kumwe chete kwesimba, nokudaro kuwedzera kugona kweiyo yazvino chipset.
Mi 10's yakawanda-yakaomeswa mhute kutonhora system
Yayo CPU, iyo Snapdragon 865 inoshandisa octa-core gadziriso neayo CPU cores akarongedzwa mune 1 + 3 + 4 masango marongero. Izvi zvinosanganisira Kryo 585 "Prime" musimboti (yakavakirwa paARM Cortex-A77 microarchitecture) yakavharwa pahuwandu hwehuwandu hwe2.84GHz, matatu Kryo 585 mashandiro anoita akavharirwa pa2.4GHz, uye ina Kryo 385 inoshanda cores (zvichibva paARM Cortex -A55) pa wachi wachi ye1.8GHz.
Yayo GPU, iyo SoC inoshandisa Adreno 650 nerutsigiro rweVulkan 1.1 graphic API. Iyo Adreno 650 ndiyo yekutanga GPU kubva kuQualcomm ine rutsigiro rweinokwidziridzwa giraidhi mutyairi iyo inogona kuvandudzwa yakananga kuburikidza neapp shop seGoogle Play Store. Iyo "GPU Mutyairi Ongororo”Chishandiso yatovepo yeiyo Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, uye iyo Redmi K30 Pro muChina.
Pakutangwa kweSnapdragon 865 muna Zvita wegore rapfuura, Qualcomm akataura kuti chipset nyowani inopa 25% nekukurumidza CPU uye 20% nekukurumidza GPU mashandiro kupfuura iyo Snapdragon 855+, iyo pachayo yaive yakawedzeredzwa vhezheni yeSpapdragon 855. zvakanyanya kuoneka sezvaungaona mune yedu kuenzanisa mabhenji.
Kunyange kuita kwacho kuchisvetuka kubva kuSnapdragon 855+ kuri pachena, takamhanya mabhenji ekugadzira pane yedu Xiaomi Mi 10 yuniti yekuyera kuti izvi zvinoshanda sei kuchinhu ichi tichienzanisa nemamwe madhizaini neiyo Snapdragon 865 yatakaongorora kuXDA. Kune uku kuenzanisa, isu tine iyo OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 + (Exynos 990), Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865), LG V60 ThinQ, Uye IQOO 3. Mune kumwe kuyedzwa, isu tinosanganisirawo iyo OnePlus 7T yekuenzanisa iko kuita kwekuvandudza.
Kutanga naGeekbench, muchinjiko-chikuva CPU bhenji, tinoona fanano pakati pemidziyo yese inopihwa neiyo Snapdragon 865 nhare mbozha. Kunze kweboka, iyo Xiaomi Mi 10 ine yakaderera-imwechete-mapfumbamwe zvibodzwa - kunyangwe ichisaririra kuseri kwevamwe nemuganho mudiki chete - pamwe neyepakati middling yeiyo yakawanda-yepakati bvunzo. Zvakaoma kupinza mutsauko uyu kune chero hunhu hwakavakirwa pabhenji rimwe chete, saka tichaedza kupenda mufananidzo uri nani mushure mekuenzanisa mhedzisiro kubva kune ese mabhenji.
PCMark's Work 2.0 bhenji inoyedza kugona kwefoni kupedzisa zvakajairika-epasirese mabasa ayo anogona kunge asingadi zvakanyanya. Aya mabasa anosanganisira webhu kubhurawuza, kutora-kutora, foto kana vhidhiyo kugadzirisa, uye inomiririra data pane maspredishiti uye nekugadzirisa iwo pane mbozhanhare pachayo. Mukuenzanisa kwedu, iyo Xiaomi Mi 10 zviyero zvakadzikira zvisina kujairika paBasa 2.0 bvunzo uye ine yakaderera yepasi rose zvibodzwa muboka redu rekuyedza - inowira kunyangwe pazasi peOnePlus 7T.
Tichifunga mamwe mafoni akati wandei ane chakaenzana Hardware mamaki zvirinani kupfuura iyo Xiaomi Mi 10, isu tinofungidzira kuti mutsauko uyu unogona kunge wakakonzerwa nekumwe kusakwana muXiaomi's tsika Android ganda MIUI.
3DMark Sling Shot Yakanyanya
Tevere, isu tinofunga 3DMark Sling Shot Yakanyanya kuenzanisa iwo magiraidhi mashandiro eiyo Xiaomi Mi 10 ichipesana nemimwe michina muboka redu rekuyedza. Iyo bhenji inoshandura yakajeka mifananidzo yakajeka ichishandisa iyo Vulkan uye OpenGL ES 3.1 APIs kuyedza iwo magiraidhi mashandiro emidziyo. Iyo Xiaomi Mi 10 inoita zvirinani kupfuura iyo Exynos 990-inofambiswa Samsung Galaxy S20 + muSling Shot Extreme asi yakasara kumashure kweGlass 20 Ultra uye LG V60 ThinQ, ese ari maviri anogovera zvakafanana CPU neGPU seMi 10.
Sezvandambotaura, iyo Xiaomi Mi 10 uye iyo Mi 10 Pro ari mamwe emafoni ekutanga kuwana anovandudza madhiraivha eGPU, saka tinogona kuona kumwe kugadziridzwa kwekuita kwemifananidzo kana mamwe madudziro edhiraivho achisundirwa pasirese.
Kuenzanisa yakagadziridzwa magiraidhi mashandiro eAdreno 650 GPU achienzaniswa nezera rekare Adren0 640 mune iyo Snapdragon 855+ mobile platform, isu takashandisa iyo GFXBench bhenji. Iyo yakakwira furemu chiyero mune sere kubva pfumbamwe bvunzo dzeiyo yepamusoro-kusimba bvunzo muGFXBench iri pachena inoratidza kuratidza yakawedzera GPU mashandiro eXiaomi Mi 10 kune iyo OnePlus 7T.
Thermals uye CPU Kukanganisa
Iyo Snapdragon 865 mutambi anoita semhuka zvinoreva kuti CPU ichatanga kuburitsa kupisa kwakawanda mangoti cores paanokwira achiwandisa. Kudzivirira kukuvara kweiyo Hardware kubva pakupisa, kupwanya algorithms kudzikamisa mashandiro uye nekudaro huwandu hwekupisa hunogadzirwa nemushini. Kunyangwe iyo Xiaomi Mi 10 ichiuya neiyo 3D mhute kamuri yekudzima kupisa kure neCPU, isu tichiri kupupura kumwe kupopota paMi ​​10. Kuti tiongorore kukura kweCPU kuputika mukupindura kupisa kuri kuwedzera, isu tinoshandisa app inongodaidzwa kunzi CPU Kubvunda Bvunzo iyo inomhanyisa iterative kodhi inounganidzwa muC kuti uone kuti CPU inopindura sei kana yaiswa pabasa rakaoma kwenguva yakati siyanei.
Yedu bvunzo, isu takamhanya nemuyedzo muzviitiko zvitatu zvakasiyana: Kutanga neyakaedzwa nguva yakatarwa kusvika pamaminetsi gumi neshanu, yechipiri ine bvunzo nguva yakatarwa kusvika pamaminetsi makumi matatu, uye chechitatu nemaminetsi gumi nemashanu kumhanya kana foni ichichaja. Chiitiko chechitatu chinotorwa mukuyedza kuyedza kwakabatana kwekudziya nekuda kwekushandisa kweCPU uye nekuda kwekuchaja. Isu tinoona kuti iko kuita kweMi 15 mumuyedzo unoputika kusvika pa30% yeiyo yepamusoro mamaki apo bvunzo inomhanya kwemaminetsi gumi nemashanu. Kana iyo bvunzo ikamhanyisa kwemaminetsi makumi matatu, iko kuita kwacho kwakakwenenzverwa pa15% yehuremu hwayo asi padivi pekudonhedza mukuita kwepamusoro zvakare, izvo zvinokomberedza kusvika pamakumi masere neshanu mashandiro mushure mekudonha.
Chekupedzisira, kune iyo kesi apo iyo Mi 10 iri kubhadharisa, pane kudonha kukuru mukuburitsa. Kunyangwe kuita kwacho kuchidonha kusvika pa84% yeiyo chaiyo bvunzo inomhanya, iyo yepamusoro kuita inoderera kusvika kungangoita 87% yekutanga bvunzo. Izvi zvinoreva kuti kuita kwese kunonyura kunosvika 73% yezvatakatarisa muyedzo yekutanga.
Isu takaongorora zvakare kukwenya mukati mekuita kwemifananidzo nekufunga nezve kudziya kweGPU uye kudzikira kwekuita tichimhanyisa bvunzo yebhatiri muGFXBench kwenguva yakareba makumi matatu. Iyo bvunzo inotanga panenge pamusoro peCPU tembiricha ye30 renderC ichiri kupa ingangoita mazana mana nemazana matanhatu mafuremu pane iteration. Iwo mashandiro anoita masheya nekukasira mushure meiyo yechishanu iteration ichidonhera pasi kutenderera mazana matatu nemazana manomwe emazana panguva yekumhanya kwechinomwe. Zvichakadaro, tembiricha tembiricha inokwira nekukasira uye inodarika 33ºC mune ingangoita maminetsi gumi nematatu apa huwandu hwemafuremu akapihwa unonyura kusvika kungangoita mazana matatu nemazana mashanu uye unogara wakamira kusvika kupera kwekuyedza. Izvi zvinoreva kuti kuita kunoguma kweiyo CPU-GPU pamwechete kwakapunzika panenge pa4,600%.
Mukuenzanisa, isu takamhanya nemuyedzo mumwe chete apo uchiongorora iyo Realme X2 Pro ine Snapdragon 855+ chipset mukati uye yakawana kuita kwayo kwepamusoro kwaishamisa padyo nemuswe wekupedzisira wemhedzisiro yeSnapdragon 865, izvo zvinokatyamadza tichifunga kuti mapuratifomu maviri enhare akatangwa mwedzi mitanhatu chete.
Kunyangwe kupopota, iyo Snapdragon 865 pane iyo Xiaomi Mi 10 5G inopwanya iyo Snapdragon 855+ pamatanho egore rapfuura.
Kunyangwe kuodza moyo sei mhedzisiro yeiyi CPU yekupwanya miedzo ingaratidzika, iyo Snapdragon 865 uye Adreno 650 yakaratidza kuve yepamusoro kune avo vakavatangira kubva gore rapfuura. Zvakare, iyo simbi furemu yakatenderedza Xiaomi Mi 10 inoshanda kwazvo maererano nekudzora kupisa kwemukati kunzvimbo dzakatenderedza. Kwete izvozvo chete, ini ndaigona kutonhodza foni pasi nekukasira mushure menguva yemutambo wekutamba nekuibata mushe pamberi pemhepo inogadzirisa.
Ini ndinofanirwa kujekesa kuti ambient tembiricha inogona kukanganisa kutonhora kwefoni uye kutokanganisa mhedzisiro yatinowana kubva pamabhenji. Kunyangwe iwo mabenchmark achiguma mune ino ongororo zvimwe kana zvishoma kutaura uchitsigira Xiaomi Mi 10, tinogona kutarisira kumwe kutsauka neshanduko dzemamiriro ekunze. Nezve rekodhi, bvunzo dziri pamusoro dzakaitwa patembiricha iri pakati pe25ºC.
Xiaomi's Mi 10 inouya neUFS 3.0 NAND yekuchengetera iri nekukurumidza kupfuura masisitimu eUFS 2.1 anoshandiswa mumidziyo yeXiaomi yekumberi kubva gore rapfuura. Kuyedza chiyero chekufambisa faira pane Xiaomi Mi 10, isu tinoshandisa iyo AndroBench yekuchengetedza bhenji kuti utore zvinotevera zvinotevera.
Iwo akateedzana uye akasarudzika kuverenga / kunyora kumhanya angangoita akaenzana akafanana nezvimwe zvishandiso mukuenzanisa kwedu. Zvinonzwisisika, iyo IQOO 3 - yekutanga foni ine UFS 3.1 NAND yekuchengetedza chip - ndiyo inokurumidza pakati peboka.
Isu tinonzwisisa iwo ekugadzira mabhenji, kunyangwe ichiisa mufananidzo unoonekwa wekuita kwefoni, usanyatso kujekesa pahwo chaihwo-hwehupenyu kuita. Saka ramba wakatarisira kuongororwa kwemitambo kweiyo Xiaomi Mi 10 uye Mi 10 Pro mureza.
Iyo haptics injini pane Xiaomi Mi 10 inowedzera premium kunaka kune yemushandisi chiitiko. Iyo X-axis vibration mota pane iyo smartphone inogadzirirwa kuti ipindure kune vibrations yeakasiyana masimba ezviito zvakasiyana senge kuvhura foni, kurova pane inokurumidza masetera mataira, kuvhura Zvazvino, kujekesa ziviso, kana kushandisa mabhaisikopo ekufamba kuti udzokere. Mhinduro ye haptic inosimudzira chiitiko parunhare kusvika padanho repamusoro zvachose zvekuti hapana imwe foni yeXiaomi yakambosvika.
Iyo haptic mhinduro chiitiko paMi ​​10 inotodarika chero imwe mureza wandakamboshandisa munguva yadarika yapfuura uye iro rondedzero inosanganisira iyo OnePlus 7T, iyo Google Pixel 3 XL, iyo Apple iPhone XS, uye iyo Samsung Galaxy S10. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kugadzirisa-kusimba kweiyo haptic mhinduro kuti ienderane nezvaunoda.
Chimwe chikuru chakasarudzika cheXiaomi Mi 10 ndeye yayo stereo mutauri setup. Pamusoro pevaviri vaviri vane chiuru chevanegumi nematanhatu masipika, iyo Mi 1216 inosimbiswa yeHi-Res odhiyo yekutamba yekurasa isina kurira kuburitsa kuburikidza neaya masipika. Iwo ekumashure-ekupfura masipika anoburitsa ruzha, yakajeka, uye yakaenzana kurira kuburitsa. Paunoshandura kwawakabata nhare, kuruboshwe uye nzira chaidzo dzinogadziriswa uchishandisa ruzivo kubva kugyroscope.
Xiaomi akarongedza hombe 4,780mAh bhatiri muMi 10 iyo inogona kukurerutsira nyore nyore kuburikidza nezuva rese rekushandisa zvisina kujairika. Tichifunga nezve hombe, ine simba, inotsvedzerera, uye nekudaro, kuratidza simba-nzara, zvingave zvisina musoro kutarisira kuti zvakafanana zvive zvechokwadi pakushandisa rinorema-basa. Nekudaro, iwe unogona kukohwa mashoma mashoma ekuwedzera maawa ekuchengetedza nekudzima iyo Inogara-Yakavezwa Ratidza. Pamashandisirwo akajairwa, pasina yakawanda mitambo, iyo Xiaomi Mi 10 inogona kugara ingangoita maawa makumi maviri pabhatiri ne20 kusvika maawa mashanu echiratidziro-pa-nguva.
Takamhanya PCMark's Work 2.0 bhatiri bvunzo yehupenyu pachigadzirwa pazvimiro zviviri zvakasiyana zvekupenya kwescreen - kupenya kuzere uye pamutengo we200 nits (kuyerwa ne Pixel 3 using the Lux Chiedza Meter app). Pana 200 nits kupenya, iyo Xiaomi Mi 10 yakagara kota pamusoro pe13 maawa. Kune rimwe divi, foni yakamhanya kweanopfuura maawa manomwe pakujeka kwakazara (kuyerwa kwakatenderedza mazana mashanu emidziyo mumba uchishandisa imwecheteyo seiri pamusoro).
Mukuenzanisa, iyo Realme X50 Pro'' 4,200mAh bhatiri rakagara kungangoita maawa matanhatu pakujeka kwakazara uye maawa gumi nerimwe pakupenya kushoma, kunyangwe paine kuratidzika kudiki uye kwakatsetseka.
Bhatiri reMi 10 rinoita basa rakanaka rekugara mukati mezuva asi zvinonzwisisika kuti iwe ufunge kukwidza kamwechete mune imwe nguva. Iyo Xiaomi Mi 10 inouya yakagadzirirwa izvo nerutsigiro rwe30W inokurumidza wired kuchaja pamwe ne30W nekukurumidza Wireless kuchaja rutsigiro. Uchishandisa charger ine waya, foni inotora ingangoita maminetsi makumi maviri nemashanu kubhadharisa kubva pa25% kusvika pa10% uye ingangoita 50 awa yakazara kusvika kuzere kugona kubva ku1%.
Pamwe neMi 10, Xiaomi yakaunzawo yayo 30W isina waya yekuchaja inomira ine yakavakirwa-mukati fan. Paunenge uchishandisa charger isina waya, iyo nguva yekuchaja inogona kureba, ichisiyana kubva pa1 awa uye nemaminetsi gumi nemashanu kusvika chero maawa 15. Izvi zvinodaro nekuti mwero wekuchaja unogadziridzwa kuchengetedza bhatiri kubva pakupisa. Xiaomi India akatitumirawo Mi inokurumidza isina charger pamwe neiyo smartphone yeiyi bvunzo. Iyo inouya ne2.5W adapter uye USB-C tambo mukati mebhokisi, asi uchafanirwa kuitenga zvakasiyana ₹ 2,299 muIndia.
Takaedza bhatiri yekuchaja mwero muzviitiko zvitatu zvakasiyana: chekutanga, tichishandisa 30W wired charger, kechipiri, ine isina waya charger mune ine mhepo-inotonhorera imba ine ambient tembiricha ye25ºC, uye pekupedzisira imwe imba isina mhepo inotonhorera uye ine ambient tembiricha 35ºC (zviyero zvine mutsindo weMi Air Vanonatsa).
Girafu pazasi inoratidza kuenzanisa kwemitengo yekuchaja yezviitiko zvitatu zvakasiyana:
Sezvauri kuona kumusoro, iyo Xiaomi Mi 10 inobhadharisa iyo inomhanyisa pamusoro peiyo wiring kubatana uye inononoka kushandisa isina waya yekuchaja stand kana pasina mhepo yekugadzirisa. Iyo nguva yekuchaja yeiyo isina waya yekuchaja stand inogona kusiyanisa neye tembiricha uye kunyange kuwedzera pane yakanyanya tembiricha asi izvo hazvisi izvo zvinorerutsa iyo inounza patafura. Iwe haufanire kusungirirwa padapter yemadziro uye unogona kurega foni ichizorora papadhi yekuchaja kana iwe usingade kuishandisa wozoisimudza ipapo pazvinenge zvichidiwa. Kunyangwe paine nguva yakareba yekuchaja, ndanga ndichichaja iyo Xiaomi Mi 10 kunyanya ine isina waya charger.
Mi 10's 30W inokurumidza isina waya kuchaja haingokusunungure iwe kubva kunamatira kune yemadziro adhaputa asi zvakare unozviita pasina kudzora kudzora maitiro.
Chekupedzisira, iyo Xiaomi Mi 10 zvakare inotsigira 10W reverse isina waya kuchaja iyo inogona kushandiswa kubhadharisa chero Qi-inoenderana inoenderana kana smartphone.
Muongororo yekuita pamusoro apa, takaona kuti Xiaomi Mi 10 ndeimwe yeakanakisa anoita mafoni kunze uko, asi ini ndinonzwa kuti inosiya zvakawanda chishuwo kana zvasvika pane software ruzivo. Iyo Xiaomi Mi 10 - sekungofanana nemamwe mafoni Xiaomi kana Redmi - ngarava dzine MIUI 11, iyo yandinotenda ndiyo yega yakashata yeiyo smartphone. MIUI ndeimwe yeakanyanya-akapfuma Android-based software ruzivo rwakagadzirirwa zvinongoita zvirinani neMIUI 12 padhuze. Asi sezvazviri parizvino, ruzivo rwe software rwunonzwa rwusina kupepereswa uyezve ichishaya finesse iyo mamwe maratidziro akafanana OxygenOS uya.
Xiaomi yakaedza kunatsiridza ruzivo rwe software nekutsiva yavo mameseji, dialer, uye iyo mukurumbira wekushandura maapplication nezvakaenzana kubva kuGoogle. Iyo kambani yakatowedzera sarudzo yekushandisa Google's Discover feed nekutsvaira kumusoro kubva pasi pechidzitiro chekumba. Asi iyo UI ichiri kuuya neasina kudiwa bloatware uye Xiaomi maapps apo iyo Mi Vhidhiyo app, pamwe neGetApps app chitoro, ichiri kukutumira iwe pesky notices yeanokanganisa maapplication uye zvemukati. Izvo zvinogona kuve zvinonzwisisika kune bhajeti Xiaomi foni, asi zvinokanganisa zvachose chiitiko pane premium smartphone senge Mi 10.
Uye zvakare, nepo Xiaomi achizviti hapana kushambadzira muUI, iyo "yekushambadzira kusarudzika" sarudzo ichiri kuratidza panguva yekumisikidza maitiro. Ini handisati ndawana chero kushambadzira muhurongwa - chengetedza zviyeuchidzo zvinotsamwisa kubva kuiyo vhidhiyo app - asi sarudzo ichiri kuita kuti ndisimudze ziso rangu.
Neraki, Xiaomi parizvino inotsigira yekuvandudza tsika uye haizoiti garandi yako yekuvhura bootloader yezvakagadzirwa. Izvi zvinokutendera iwe kuyedza yechitatu-bato tsika maROM kana maGSI ekuvandudza iyo software ruzivo pane Xiaomi Mi 10. Asi, izvo zvingasarudzwa ndezvevanoda hardcore uye havazi vese vanoshandisa izvi zvakanyanya pa smartphone vachazoda kutora ivo kuti vadzike kuisa tsika firmware. Panzvimbo iyoyo, ivo vanotarisira yakachena, inokurumidza, uye inofambidzana UI inotakurwa kweyekutanga ruzivo kunze kwebhokisi, uye apa ndipo panotadza Xiaomi parizvino neMIUI 11.
Iyo Xiaomi Mi 10 inotsigira SA uye NSA 5G kubatana asi chete kune sub-6 GHz mafambiro uye kwete mmWave. Iyo zvakare inotsigira 4G ine inotakura yakaunganidzwa. Uye zvakare, kune Wi-Fi 6 tsigiro yeiyo inokurumidza-kutsanya WLAN uye mbiri-frequency GNSS rutsigiro rwechinzvimbo chakaringana. Iwo ma network mabhendi anotsigirwa nemusiyano wepasi rose weMi 10 unosanganisira
4G TD-LTE: n38 / n40
Iyo smartphone inotsigira mbiri-SIM, mbiri-yakamira ine mbiri 4G yekubatanidza muIndia neChina. Nekudaro, iyo yepasi rose vhezheni inouya neine imwechete SIM slot. Uye zvakare, kune avo venyu vane mbiri SIM sim, chete yekutanga SIM ndiyo inokwanisa kumhanyisa pa5g apo iyo yechipiri SIM inogona kumhanyisa 4G ine inotakura kuunganidzwa kuma max.
Iyo 108MP kamera pane Xiaomi Mi 10 uye iyo Mi 10 Pro ndiyo huru inosimbisa yechigadzirwa. Iyo kamera inoshandisa Samsung ISOCELL Yakajeka HMX sensor ine saizi yakakura kupfuura iyo 64MP kana 48MP sensors kubva kukambani uye pixel saizi ye0.8mm. Uchishandisa 4-in-1 pixel binning, iyo kamera inogona kutora 27MP kupfura. Panyaya yevhidhiyo, iyo Mi 10 inouya neOIS pane yekutanga sensor pamwe nerutsigiro rwe4K kurekodha kusvika ku60fps uye 8K kurekodha pa 24fps kana 30fps.
Kunze kwekamera yekutanga, iyo Mi 10 inoratidzira 13MP yakafara-angle kamera, 2MP macro kamera ine autofocus, uye 2MP yakadzika sensor.
Tiri kusvetuka yakazara kamera ongororo kubva kuongororo iyi nekuda kwezvirambidzo zvekufamba muIndia maererano neECVID-19 kuraira. Nekudaro, wandinoshanda naye, Max Weinbach, akatora mifananidzo yakawanda pane yake Mi 10 Pro unit yatinogona kugovana pano. Isu takaisa pamwechete dambarefu remifananidzo kubva kuMi 10 Pro yekutanga kamera uye selfie kamera sezvo ese ma sensors akafanana neayo akajairwa Mi 10 yandiri kuongorora.
Xiaomi Mi 10 (Pro) Primary 108MP Kumashure uye 20MP Selfie Kamera Samples
Isu tinotarisira kushandisa mamwe makamera ekumashure munguva pfupi iri kutevera kwete kungoongorora huwandu hwekamera chete asiwo kuenzanisa iwo ne 48MP uye 64MP kamera kamera kubva kuXiaomi.
Xiaomi Mi 10: Kufungidzira iyo Mi brand
Xiaomi inokodzera kuzivikanwa nekugadzira ayo akanakisa-anotaridzika uye anonyanya kuita mafoni parizvino. Iyo Mi 10 uye iyo Mi 10 Pro haingori yekuraira kutarisisa kwako nemagadzirirwo avo asiwo inokuchengetedza iwe kuti ubatwe nekuda kwekuita kunoshamisa. Kunyangwe iwe uchida kutora mifananidzo yakajeka neiyo 108MP kamera kana kugona pamitambo yemafoni, iyo Xiaomi Mi 10 yakagadzirirwa zvese zviitiko.
Iyo yega yepazasi yeiyo smartphone ndeye MIUI 11 software ruzivo, uye nepo Xiaomi ichiita kunge yakaburitsa makinks mazhinji mune iyo MIUI 12 yekuvandudza, haisati ichinzwa senge inotapira interface kunze uko. Asi kana iwe uchikwanisa kushanda neMIUI, saka iyo Mi 10 ndeyechokwadi smartphone iyo yakakodzera kutarisisa kwako.
Kana iwe uri kutsvaga kutenga iyo Mi 10 muEurope, iwe uchafanirwa kushandisa € 799 yeiyo 8GB + 128GB musiyano kana € 899 yeiyo 8GB + 256GB musiyano (kunyange iwe ungaiwana mune dzimwe nzvimbo zvishoma). MuIndia, iyo Mi 10 inotemerwa pa ₹ 49,999 kana ₹ 54,999 yeiyo 128 kana 256GB yekuchengetedza akasiyana, zvichiteerana. Iyi mitengo yakakwira zvakanyanya kupfuura kuChina asi Xiaomi iri kungogadzira zvishandiso muIndia neChina uye mutengo mune mamwe matunhu unosanganisira mabasa ekupinza uye / kana mamwe mitero yemuno.
Tenga Xiaomi Mi 10 5G: India (kutanga pa ₹ 49,999) || Itari (€ 737) ||| Jerimani (€ 870) || Spain (€ 799)
The post Xiaomi Mi 10 Ongororo - Redefining Mi sePrimrim Smartphone Brand yakatanga kutanga xda-vatadzi.